कोरोना विषेश Archives - Page3of3- Nagarik Today
धादिङ – जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यकबाहेक धादिङ जिल्ला प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । संकट व्यवस्थापन केन्द्र धादिङको शुक्रबार बसेको बैठकले संघीय सरकारले गरेको निर्णयलाई कडाइका साथ लागु गर्दै धादिङ प्रवेश गर्ने पिपलमोड र चितवनबाट धादिङ प्रवेश गर्ने मौवाखोलाबाट मानिस आवागमनलाई पूर्णत: निषेध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङको अध्यक्षतामा शुक्रबार धादिङबेँसीमा बसेको सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले काठमाडौँबाट धादिङ प्रवेश गर्ने दुई नाकामा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसैगरी सवारी सञ्चालन पास नभएका सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याइए प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइ संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा ३ बमोजिम कारबाही गरिने निर्णय समेत गरेको छ । खाद्यान्न, औषधि पसललगायतका दैनिक अत्यावश्यक पसल बिहान ७ बजेदेखि १० बजेसम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
तीन दिनभित्र ४ हजार पीसीआर परीक्षण गरिने
काठमाडौं – सरकारले २८ वैशाखभित्र चार प्रदेशका १२ जिल्लामा ४ हजार ३७० जनाको कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
कोभिड—१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) ले वैशाख २६, २७ र २८ गते ४ हजार ३७० जनाको पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गर्ने निर्णय गरेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सह—प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीका अनुसार प्रदेश १ को उदयपुरमा पाँच सय, प्रदेश २ को बारामा दुई सय, पर्सामा पाँच सय जनाको स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गरिनेछ ।
त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा नवलपरासी पूर्वबाट ४० जनाको स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गरिनेछ । प्रदेश ५ मा नवलपरासी पश्चिम १५०, अर्घाखाँचीमा १८०, रुपन्देहीमा तीन सय, गुल्मीमा दुई सय, कपिलवस्तुमा ५ सय, प्युठानमा दुई सय, बाँकेमा एक हजार र बर्दियामा पाँच सय जनाको स्वाव संकलन गर्ने गरेर परीक्षण गर्ने तयारी छ ।
स्वीटजरल्यान्ड सरकारको सहयोगमा नेपालमा बिहीबारमात्र ३० हजार पीसीआर परीक्षण किट प्राप्त भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले शुक्रबारको दैनिक अपडेटमा अब पीसीआर परीक्षण बढ्ने बताए । सरकारले भारतबाट आई क्वारेन्टाइनमा बसेका, उच्च जोखिम क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति र संक्रमितको कन्ट्याक ट्रेसिङबाट पहिचान भएका व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकता दिएर कोरोना परीक्षण गर्ने बताएको छ ।
४३४ सांसद् तथा कर्मचारीको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ
काठमाडौं – संघीय (संसद प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) का सांसद् तथा कर्मचारीको कोभिड–१९ को स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले बिहीबार परीक्षण गराएका सबै ४३४ को रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जानकारी दिए । तीमध्ये २१२ सांसद र बाँकी संसद् सचिवालयका कर्मचारी हुन् ।
उनीहरु सबैको संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा स्वाब संकलन गरी पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो ।
आजदेखि संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु हुँदैछ । कोरोनोको जोखिम हुन नदिन सांसद् र कर्मचारीको अनिवार्य पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो ।
महाशाखा निर्देशक डा पाण्डेका अनुसार बिहीबार परीक्षण नभएका सांसदको आज पिसिआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिएको छ ।
वासिंटन – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उपराष्ट्रपति माइक पेन्सको कोरोना परीक्षण गर्दा नेगेटिभ रिपोर्ट आएको थियो ।
तर राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसमा कार्यरत एक सैनिकलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । ह्वाइटहाउसका प्रवक्ताले बिहीबार जनाए अनुसार ह्वाइट हाउसको सुरक्षार्थ खटिएका एक सैन्य अधिकारीमा कोरोना संक्रमण भेटिएको हो ।
‘हामीले भर्खरै थाहा पायौँ कि, ह्वाइट हाउसको मेडिकल टीमले एक ह्वाइट हाउसमा कार्यरत सैनिकमा संक्रमण भएको जानकारी दियो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा कुनै स्वास्थ्य समस्या छैन । उहाँहरको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो,’ प्रवक्ता होगन गिड्लीले बताएका छन् । ट्रम्पको दुई पटकसम्म कोरोना परीक्षण भइसकेको छ । तर नेगेटिभ रिपोर्ट नै आएको छ । पहिलो पटक अप्रिल २ मा गरिएको थियो ।